Ntuziaka iji gaa Moscow | Akụkọ Njem
Ntuziaka iji gaa Moscow
Mariela Carril | | Nduzi, Moscow
Na-esote afọ ga-emezu otu narị afọ nke mgbanwe Russia. Can nwere ike iche n’ịnọ na Moscow n’oge ahụ? May nwere ike ọ gaghị abụ onye komunizim, mana obi abụọ adịghị ya na ụbọchị ncheta 2017th nke nkwụsịtụ na akụkọ ntolite ọdịda anyanwụ dị egwu. Ma ọ bụrụ na enwere oge pụrụ iche ịga Moscow ọ ga - abụ n’agbata Ọktoba na Nọvemba nke afọ XNUMX.
Enwere oge ịhazi njem ahụ na ịhazi ihe niile. Ogbenye Moscow na-adọrọkarị mma nke St. Petersburg ma hapụ ya naanị aha isi obodo Russia na oche nke Kremlin, mana o nwere ihe ọzọ ị ga-achọpụta ya ya ndu mkpụkpu je eleta Moscow ọ na-arụ ọrụ gị.
2 Kacha mma nke Moscow
Ọ bụ a populous obodo ebe ihe karịrị nde mmadụ iri bi na kemgbe ọtụtụ afọ o nweela ọtụtụ ndụ ọdịnala, ehihie na abalị. E nwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, Ogwe, klọb na ụlọ ahịa. Ma n'ezie, enwerekwa Kremlin, Tomb's Lenin, ụka ya na Red Square, otu n'ime ama ama ama ama n'ụwa niile.
Enwere ezi oge abụọ n'ime afọ iji gaa Moscow: kemgbe mmalite Mee ruo etiti July, tupu ọ bụ midsummer na ezi na-ekpo ọkụ, na mgbe site na oge nke Afọ ọhụrụ. N'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na ị gaa maka 100th Anniversary of the Russian Revolution a ga-eme atụmatụ na ihe ndị a ga-eme na Nọvemba, yabụ enweghị nhọrọ ọ bụla na anyị ga-atachi obi na oyi.
Iji banye Russia ị ga-ahazi visa ya mere, ọ ga-adị mma ma i mee ya opekata mpe ọnwa atọ tupu ị gawa njem. Enweghị ike ịhazi ya tupu oge ahụ, mana ị kwụgbughị oge ma wepụ ya. Site na ọdụ ụgbọ elu ị nwere ike were tagzi, dịtụ oke ọnụ, ma ọ bụ ka mma, Aeropexpress, ụgbọ oloko nke jikọtara isi abụọ na njem dị n'etiti 35 na 40 nkeji ma na-efu ihe dị ka euro 8, karịa ma ọ bụ obere.
Enwere ọdụ ụgbọ elu atọ dị na mpaghara ahụ, mana ị ga-abanye na mba Sheremetyevo 2 ma ọ bụ site na Domodedovo.
Kacha mma nke Moscow
La Ogige Uhie Ọ bụ obi obodo ahụ na ụbọchị site na ngwụsị narị afọ nke XNUMX. O nwere aha ndị ọzọ tupu mgbe ahụ mana nke a edebela ya kemgbe narị afọ nke XNUMX. Buildingslọ ya sitere na oge dị iche iche na otu n'ime ha bụ n'ezie Kremlin. N'ezie, a mụrụ square ahụ mgbe Tsar nyere iwu ịkwatu ụlọ osisi niile gbara gburugburu ma nwee ike gbaa ọkụ.
Taa Kremlin Ọ bụ nnukwu ihe ngosi nka, ihe owuwu nke ụlọ ochie na-ezochi ezi akụ nke akụkọ ntolite Russia: enwere obí eze, katidral na ihe nchetas Enwere ụlọ elu Spasskaya, nke emere na 1491, yana ọnụ ụzọ mbata ya na Kremlin na nke amachibidoro ndị nkịtị oge. Enwere nnukwu mgbịrịgba, Bell nke Ivan Onye Ukwu, nke bu nani ndi foduru ndi ozo noro otutu otutu aro gara aga, ndi anakpokwara Mgba nke eze ukwur, ogbugbu kacha ochie n'ụwa, etinyere n'oge nwa Ivan dị egwu, na njedebe nke narị afọ nke XNUMX.
Mgbidi ahụ akpọchiri akpọchi na-ekpuchi ihe karịrị kilomita abụọ ma nwekwa ụlọ elu 19, gburugburu ya gbara ya gburugburu. Enwere Katidral nke Nkwupụta, nke Dormition, nke Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael na nke Assumption, ha na akụ ha dị n'ime. E nwekwara Ebe a na-eli ozu Royal na Chọọchị nke ntinye nke Mantle nke Virgin na nke Ndịozi iri na abụọ. Na Katidral nke Dormition, malite na 1479, e kpuwere okpueze na ọ bụ ya nwere domes ọla edo ise. Ndị tsars na-ehi ụra ebighi ebi na Katidral nke Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụlọ ndị na-abụghị nke okpukpe mgbe ahụ enwere Obí nke Akụkụ, na ngwụsị narị afọ nke XNUMX na Obí nke Terems, ma jikọtara ya na Nnukwu Obí Kremlin. E nwekwara Arsenal, nke chere ihu na ndagwurugwu na n'ime ihe dị mkpa Ngwá agha. Nleta njem nleta na-enye gị ohere ịmara ụlọ eze niile, ebe a na-ebibi ihe, ngwa agha na Tsar Cannon na Tsar Bell.
La Katidral St. Basil Ọ bụ otu n'ime ndị a kacha mara amara n'ụwa ma wuru ya n'etiti narị afọ nke XNUMX na iwu nke Ivan na-atụ egwu iji cheta nnweta nke Kazan. Ọ dị na Red Square ma nwee ọmarịcha ọkụ mara mma. E nwere ngụkọta nke asatọ n'akụkụ ụka gburugburu a center, ụfọdụ obere na ụfọdụ ibu. Ihe niile mara mma.
La Katidral nke Kraịst Onye Nzọpụta Ọ bụ Alexander I wuru ya ma nwee ọtụtụ ụlọ ụka maka ndị nsọ dị iche iche. O nwere chandeliers 640 na 600 ndị ọzọ nọ na ukwe. Ọ dị ihe karịrị otu narị mita n'ịdị elu na ọchịchọ ịmata ihe: na 30s chọọchị ahụ fefere site na ikuku ma dochie ya na ebe igwu mmiri. Emegharịrị ya na 1994 ma taa, ọ nwere ọmarịcha ihe ngosi nka yana ebe nleba anya dị mma ileta.
Otu n'ime ebe ndị ọzọ ị kwesịrị itinye na nleta gị bụ Odelọ ndị mọnk Novodevichy, nke Thelọ ihe nkiri nke Bolshoi na n'ezie ihe Ili Lenin. Nke ikpe azu di n’etiti square na bu a mausoleum nwere iko sarcophagus n'ime nke na-edebe ozu Lenin. O sitere na 1930 ma mee ya site na itinye granite uhie. Maka nke ya Theaterlọ ihe nkiri Bolshoi Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'ụwa na, ha na-ekwu, nke abụọ kachasị na Europe n'azụ La Scala na Milan.
Ị nwere ike gaa gala ma obu banye maka njegharị a na-eduzi nke dị n’asụsụ Bekee ma ọ bụrụ naanị na Mọnde, Wednesde na Fraịdee. Nleta ahụ na-ewe ihe karịrị otu elekere ma na-efu ihe dịka 1330 rubles. Ọ na-amalite n’elekere 12:15 nke abalị wee zụta tiketi n’otu ụbọchị n’ụlọ ọrụ ihe nkiri. Ọ ga-adị mma ka ị laa n’oge n’ihi na ndị otu a karịrị mmadụ iri abụọ.
Nleta na Moscow Metro dịkwa ya mkpa n'ihi na ọdụ ndị ahụ emeela ochie ma nwee ọfụma mara mma, oriọna na ihe ịchọ mma. Ma ebe ọ bụ na ịnọ ebe ahụ, ịnwere ike ị nweta akara 7 wee pụọ na ọdụ Tushinskaya. site n'ebe ahụ ị na-eji ụgbọ ala, ọkara awa ọzọ, ị nwekwara ike gaa na Arkhangelskoe Obibi, nke a maara dị ka Versailles nke Moscowma ọ bụ. Ọ bụrụ na ụbọchị anwụ na-acha, ọ bụ oge kacha mma iji nwee ọ enjoyụ n’èzí.
Fọdụ na-atụ aro ije? Ọfọn, ị ga-agagharị na Okporo ụzọ Arbat, ndị kasị njem nleta n'okporo ámá na obodo na nke gosiri ịzụta ihe ncheta, na maka Tverskaya Ọ na-amalite ozugbo na Kremlin ma gawa ebe ugwu site na obodo ahụ. Ọzọkwa site ama Ogige Gorky, ya na osisi ya na cafes ya, na ebe mara mma nke Kitai gorod ma ọ bụ Moscow Chinatown, na site na Ogige Hemritage, nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na isi obodo Russia.
Mgbe ị gara ileta ihe a niile, ị nwere ike ịsịworị na ị maara Moscow.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Moscow » Ntuziaka iji gaa Moscow
Ahụmahụ 10 ị nwere ike ibi na New York
Nleta 5 dị nso na Florence